Lasa sesitany rehefa avy any am-ponja: antsafa nifanaovana tamin’ilay mpikatroka Vietnamiana Tran Thi Nga · Global Voices teny Malagasy
Potipotehan-dry zareo ny taolany fa tsy voa kosa ny herintsainy
Voadika ny 04 Jolay 2020 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, عربي, Nederlands, Français, Deutsch, Español, українська, русский, English
Tao amin'ny The 88 Project, tranonkalam-baovao tsy miankina manao tatitra momba an'i Vietnam, ity lahatsoratra ity. Nasiam-panitsiana ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Afaka nanatontosa antsafa niaraka tamin'ilay gadra politika teo aloha Tran Thi Nga momba ny niainany tany am-ponja sy ny zava-misy iainan'ny vehivavy sy ny ankizy any am-ponja ny The 88 Project.
Navotsotra ny fonja tamin'ny volana Janoary i Tran Thi Nga ary nalefa sesitany avy hatrany tany Etazonia. Telo taona tamin'ny sazy an-tranomaizina sivy taona noho ny fikatrohany momba ny zon'ny fananan-tany sy ny zon'ny mpiasa no vitany tamin'ny fotoana namotsorana azy.
Tran Thi Nga no gadra politika fahefatra tato anatin'ny taona vitsivitsy izay navotsotra mialoha nefa voatery natao sesitany ho takalon'ny fahafahany, taorian'i Nguyen Van Dai (Jona 2018), Le Thu Ha (Jona 2018) ary Nguyen Ngoc Nhu Quynh (Oktobra 2018).
Fara fahakeliny, indroa izy no nodarohana noho ny fikatrohany. Nodarohan'ny jiolahimboto mpanohana ny governemanta izy indray mandeha tamin'ny volana May 2014 ary tapaka ny tanany sy ny tongony, ary nodarohan'ny polisy indray ny iray hafa izay nisintona azy nivoaka ny bisy tamin'ny volana Aogositra 2015.
Nosamborina tany an-tranony tany Ha Nam tamin'ny 21 Janoary 2017 i Nga noho ny lahatsariny sy ny lahatsorany an-tserasera izany noheverina fa “fanentanana manohitra ny fanjakana.”
Jereo ny antsafa feno :